2013 October - All Things Myanmar Burmese
Aung San Suu Kyi’s speech Live broadcasting tonight
live from http://www.myanmartvchannel.com/mrtv.html
William and Kate: seen on holiday in Ibiza, Spain “William and Kate were
Soe Myat Nandar for Yin Thu Htike Silkware – 1
Myanmar actress Soe Myat Nandar showing off silkware frm Yin Thu Htike
2-3-2016 ယနေ့ ဂုတ်တွင်းမှာကားပိတ်နေတဲ့…. ကားသမားနဲ့ခရီးသည်တွေကို… သောက်ရေသန့်လိုက်လှူနေတာတဲ့ နောင်ချို..စေတနာမွန်ပရဟိတအသင်းက.. လူငယ်လေးတွေ…. အခေါက်ခေါက်အခါခါတက်လိုက်ဆင်းလိုက်.. မမောမပန်းနိုင်ပို့နေကြတာ…. ကွမ်းကြိုက်တတ်တဲ့ကားဆရာတွေအတွက်.. ကွမ်းယာတွေတောင်ပါသေးတယ်….တဲ့ Credit to Skylark Via Sithu Soe
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ ရိုးသားဖို့ကအဓိကပါ အဲလက်စ် ========================================= လူသန်းပေါင်းခြောက်ဆယ်ထဲ မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူ တစ် ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက တကယ်ကို မလွယ်လှတဲ့ကိစ္စရပ်ပါ။အောင်မြင် ကျော်ကြားသူတွေမှာ ဘယ်လိုကိုယ် ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ၊ သူတို့ကဘယ်လို အကြောင်းအရာ တွေပေါ်မှာအသေးစိတ် အာရုံစိုက် ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစ ရာပါပဲ။ ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက် ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကဒီလိုပါ ———————————————————— ကျွန်တော့်ကို ပရိသတ်တွေက ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အတိုင်း ပရိသတ် ကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေ တယ်။ သီချင်းရေးပြီးတော့ဆိုတဲ့ အခါ သိချင်တဲ့နည်းပညာတွေ၊ ဆို ပုံဆိုဟန်တွေကို ကျွန်တော်က အဓိ ကမထားဘဲနဲ့ ကျွန်တော့်သီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုခံစားပြီးပဲဆိုတယ်။ ခံစား တဲ့အတိုင်း၊ ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆို လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော့် Vocal က သီ ချင်းတစ်ပုဒ်မှာ Perfect မဖြစ်ဘူး။ […]
Lynn Lynn’s first solo show in Yangon
photo credit to : အောင်နိင်စိုး(ကစ္ဆပ)
တိုင်းပြည်တွေမွဲသွားတယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့်စစ်ကြီးဖြစ်လို့ မွဲသွားကြတယ် စစ်ပြီးရင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ လုပ်ကြရတယ် စစ်တိုက်နေတုံးလူတန်းစား အသီးသီးက လက်နက်ကိုင်ကြရတယ် အနစ်နာခံမှုတွေသည်းခံမှုတွေ ယိုင်းပင်းမှုတွေစတဲ့ လူသားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ဓါတ်တွေ ပေါ်လာသလို ရိုင်းစိုင်းမှုသူရဲဘောကြောင်မှု၊ နှိပ်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု စတဲ့ အရာအားလုံးလဲ တွေ့ နိုင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်စစ်ပြီးလို့ ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်ကြရင် လက်နက်ကို ဆက်ကိုင်ထားသင့်တဲ့လူတွေ ကိုင်ပြီးကျန်လူတွေ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ် ပြန်လုပ်ကြပါတယ် ဂျပန်၊ ဂျာမဏီစသည် ဒီလိုပဲ ပြန်လည် ထူထောင်ကြတယ် ကျနော်တို့နိုင်ငံ မွဲသွားတာ စစ်ဖြစ်လို့မွဲသွားတာမဟုတ်ပဲ လက်နက်ကိုင် လူတန်းစားကြောင့် မွဲသွားတာ အခု ဒီမိုကရေစီရပြီ၊စစ်ကြီး ပြီးသွားပြီလို့ ခံစားရလား၊ မရပါ ဒီကာလကြီးထဲမှာလက်နက်ကိုင်တာ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့ ကိုင်သလို၊ ကောင်းစားချင်လို့ ကိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီး လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ထဲမှာ ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသူတွေ ဘာမှ ပြသနာမရှိပေမဲ့ လက်နက်ကိုင်ပြီးရင် […]
Posted in Articles, Notes | No Comments »
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for October, 2013.